हिमाल खबरपत्रिका | 'लेस्बियन बनें, बन्दूक बोकें, सिरिञ्ज हानें'
'लेस्बियन बनें, बन्दूक बोकें, सिरिञ्ज हानें'
टेलिभिजन एङ्कर, टेलिसिरियल, म्युजिक भिडियो, टीभीसी, मोडलिङ हुँदै फिल्मी नायिका बनेकी निशा अधिकारीका १० मध्ये ६ फिल्म प्रदर्शन भइसकेका छन्। एघारौं फिल्म पद्मिनी को अन्तिम काममा व्यस्त निशासँग अनुशीलले गरेको कुराकानीः
१३ असोज, धरानमा
सम्पन्न फेशन शोमा
क्याट्वाक् गर्दै निशा।
तस्बीरः सोहन श्रेष्ठ
व्यस्त नायिका भन्छन् नि, त्यस्तै हो?
भर्खरै पद्मिनी फिल्मको सुटिङ सकियो, धुवाँ यो नशा को डबिङ भइरहेको छ। तीजले पनि व्यस्त बनायो। गरेका कामले संख्या मात्रै बढायो भने व्यस्त हुनुको अर्थ छैन।
पलायन भएका पुराना नायिकाको ठाउँ लिन पाउँदा कस्तो महसूस हुन्छ?
प्रतिभाशाली नायिका अहिले यो क्षेत्रमा नहुनु नेपाली फिल्मकै दुर्भाग्य हो। गौरी मल्ल, निरुता सिंह जस्ता नायिकालाई टिकाउन सक्नुपर्थ्यो। भारतमा जस्तो बुढेसकालसम्म काम गरिरहने अभ्यास हाम्रोमा नहुनु दुःखको कुरा हो।
यो क्षेत्रले पहिलेका नायिकाको क्षमता बुझ्न नसकेको हो?
धेरै वर्षपछि तृप्ति नाडकर नेपाली फिल्ममा आउँदा दर्शकले मज्जैले रुचाएका थिए। दर्शकले पुरानालाई सम्झ्िन्छन् तर यो क्षेत्रले माया मारेको छ।
नयाँ फिल्मकर्मीको आगमनले सोच र शैलीमा परिवर्तन आइरहेको छ, हैन?
कागवेनी, सानो संसार, मिशन पैसा जस्ता फिल्मले नयाँ शैली ल्यायो र लूट ले यसलाई झ्न् फैलायो। आधुनिक प्रविधिसँगै शैली बदलिंदै गएको छ।
बोलवाला त पुरानै ढर्राको देखिन्छ नि!
नयाँको आगमन र पुरानाको सोच परिवर्तन एकैसाथ भइरहेको छ। तर, महिलाकेन्द्रित फिल्म पहिले धेरै बन्थे। बीचमा नायकप्रधान एक्सन फिल्म आए। अहिले यथार्थपरक बन्न थालेका छन्। सुनगाभा मा लेस्बियनको कथा छ। पद्मिनी नारी प्रधान फिल्म हो। पुरानै शैली दर्शकले रुचाउन छाडेका छन्।
यो क्षेत्रमा आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण भएको कुरा उठिरहन्छ नि?
नेपालमा कुन क्षेत्रमा शोषण छैन र? महिलामाथि यौनशोषण फिल्मको मात्रै हैन नेपाली समाजकै मुद्दा हो। फिल्मकर्मीहरू यही समाजका सदस्य हुन्। यहाँ राम्रो–नराम्रो दुवै कुरा छन्।
सुनगाभा फिल्ममा 'लेस्बियन' बन्दा कस्तो महसूस भयो?
मलाई जर्मनीमा ६ कक्षा पढ्दै लेस्बियनबारे थाहा थियो। अभिनयको क्रममा ४० वर्षका छोराछोरी भएका लेस्बियन पनि भेटें। उनीहरू अझै खुल्न सकेका छैनन्। सुनगाभा हेरेपछि दिया मास्के र मलाई धेरैले 'तिमीहरू नै लेस्बियन हौ' पनि भन्लान्। चुनौतीपूर्ण भूमिका गरेकी छु। यसमा लेस्बियन बनें, मिशन पैसा मा बन्दूक चलाउने एक्सन भूमिका छ भने धुवाँ यो नशा मा ड्रग एडिक्ट बनें। यथार्थ देखाउन सिरिञ्ज नै हानेकी छु।
स्त्रि्कन बाहिर पनि नशामा डुबिएको छ?
चुरोटको धुवाँ मलाई मनै पर्दैन, तर 'ट्राई' गरेकी छु, वाइन खाएकी छु। नशाको अनुभव मलाई छ।
६ वर्षअघि हिमाल सँगको कुराकानीमा 'ग्ल्यामर क्षेत्रमा फिट भइनँ भने ३० वर्ष कटेपछि टेलिभिजन समाचारवाचक बन्छु वा टक शो चलाउँछु' भन्नुभा'थ्यो। अब के योजना छ?
फिल्म निर्देशन–निर्माणमा रूचि भए पनि अझै धेरै सिक्नु, बुझनु छ। अमेरिका गएर पनि फिल्मकै अध्ययन गरें। समाचार भन्ने, टक शो चलाउने चाहना पनि मरेको छैन।
कमाइ चाहिं कस्तो छ?
यहाँ रु.१२ हजारको मासिक कमाइले चार जनाको परिवार पाल्ने र रु.५० हजार कमाएर एक्लै सिध्याउने पनि छन्। राम्ररी बचत गर्न सक्ने हो भने अरू क्षेत्रमा भन्दा फिल्म क्षेत्रमा राम्रो पैसा छ। मेरो कमाइ राम्रै छ, सन्तुष्ट छु। अविवाहित छु, बुबाआमासँगै बस्छु। खर्च पनि कमै हुन्छ।